Malunga nathi - Tianjin Chunyuan Longrun Co., Ltd
Tianjin chunyuan longrun micro irrigation Technical Co., Ltd yasekwa kweyoMnga ka-2000, nto leyo kwishishini yamandulo bakhohlisa ekuphuhliseni imveliso micro irrigation kunye neemveliso zokunkcenkceshela amanzi zokonga. Ngoku inkampani yethu igubungela 33500 square metres, indawo lokwakha 25000 square metres.
inkampani yethu ngaphambili eyaziwa ngokuba yi "Langfang Chunyuan Longrun Micro zonkcenkceshelo Engineering Co., Ltd, safudukela Wuqing Industrial Park ngo-2009 yaye igama" Tianjin chunyuan longrun micro irrigation Technical Co., Ltd ".
Thina inkampani yobungcali uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwemveliso yezolimo okonga amanzi zokunkcenkceshela, izixhobo nezibonelelo, yoyilo lobunjineli, ufakelo kunye nokukhuthaza zobugcisa.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, lweshishini baye ukuze akhule kwaye aphuhle, njengoko kwasekwa iinkqubo ezine, ezizezi:
inkqubo yonkcenkceshelo drip Micro-yokunkcenkceshela nenkqubo yolawulo ngokuzenzekelayo kude lokucoca amanzi Micro-yokunkcenkceshela kunye nenkqubo izichumiso umbhobho womnatha Micro-yokunkcenkceshela
umthamo yoNyaka imveliso inkampani yethu kweemitha 350million, ukuhlangabezana neemfuno lokunkcenkceshela square 34million ngokweemitha kwindawo micro-yokunkcenkceshela. iimveliso zethu zahlolwa yi uhlolo lomgangatho likazwelonke, imveliso udidi A. Le nkampani iye yaluphumelela zolawulo lomgangatho isatifikethi inkqubo ISO9001, kwaye kwamanzi ilungu loMbutho. yenkampani yethu phambili nokuphuculwa ngokusekelwe okhoyo kwezolimo kwamanzi aneleyo-ukugcina.
Kutheni ukhetha nathi: Iminyaka 20 amava ukunkcenkceshela okuthontsizayo, sisoloko sibeke umgangatho imveliso njengoko kwigumbi elingaphantsi, ngenxa yokuba iimveliso umgangatho yethu egqibeleleyo, inkqubo yenkonzo intengiso umisela umzekelo, inkampani wethu uye wafumana igama elihle kakhulu evela phesheya kwaye zasekhaya abathengi. Siza kuwuqhubela "Ukuphucula ulwaneliseko umthengi" njengoko injongo yethu inkonzo kubathengi bethu amatsha kunye namadala kunye.
Tianjin Chunyuan Longrun Micro-yokunkcenkceshela Technical Co., Ltd Wamkelekile utyelelo lwakho!